Golaha Ammaanka ee QM oo War kasoo saaray xaaladda Soomaaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa goordhaw ka hadli doona Xaaladda Degmada Gurceel ee Gobolka Galgaduud, halkaas oo uu ka dhacay dagaal...
Home Caalamka Golaha Ammaanka ee QM oo War kasoo saaray xaaladda Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee QM oo War kasoo saaray xaaladda Soomaaliya
Xubnaha Golaha Amaanka ayaa warbixin ku saabsan xaaladda ka jirta Soomaaliya ka dhageystay Ergeyga Gaarka ah ee Xoghaya Guud.
Xubnaha Golaha Amaanku waxay walaac xooggan ka muujiyeen khilaafka socda ee ka dhex taagan Dowladda Soomaaliya iyo saameeynta taban ee uu ku yeelan karo jadwalka geedi-socodka doorashada. Waxay ku boorriyeen dhammaan saamilleyda inay isxakameeyaan, iyagoo hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda, amniga iyo xasilloonida Soomaaliya.
Xubnaha Golaha Amaanku waxay ku boorriyeen dhammaan dhinacyada inay khilaafkooda ku xalliyaan wadahadal sida ay ku jirto danta Soomaaliya ayna hortabinta siiyaan qabsoomidda doorasho daah-furan, lagu kalsoonaan karo, loo dhan yahay, oo ku dhacda waqtigii lagu heshiiyey si waafaqsan heshiisyadii 17-kii Sebtembar iyo 27-kii Maajo.
Xubnaha Golaha Amaanku waxay ku boorriyeen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha ka ah inay xaqiijiyaan in khilaaf kastoo siyaasadeed uusan ka weecin tallaabooyinkooda wadajira ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee mintidiinta ah.
Xubnaha Golaha Amaanku waxay mar kale carrabka ku adkeeyeen xurmada ay u hayaan gobanimada, madax-bannaanida siyaasadeed, tan dhuleed iyo midnimada Soomaaliya.
Previous articleBuuq ka dhashay doorashada Aqalka Sare ee Jowhar ka socota
Next articleXubnaha ka harsan Aqalka Sare oo lagu dooranayo Jowhar